Ny sampana sy ny Fikambanana /
Ny fikambanana GRAFIT (GRoupe Artistique Fiombonana Tsarahonenana), fikambana iarahan'ireo olona mpitendry zava-maneno, ao ny Ray aman-dreny misy koa ireo ankizy. Manana anjara andraikitra lehibe tokoa ny fikambanana amin'ny fampandehana ny fanamafisam-peo ao am-piangonana sy ny fintendrena ny hira mandritry ny litorjia.
Ny hevitry ny hoe GRAFIT. Raha henoana amin'ny feo fotsiny dia maheno karazana anarana vato ianao, tsy inona izany fa ny "Graphite", izay karazana vato malemy, karazana "diamant" ihany rehefa tena tsara, dia io no tahafin'ny "GRAFIT", vato mirafitra avy amin'ny "atome de carbone" nefa mahavita zavatra maro eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona, ampiasaina amin'ny akora maro samihafa ihany koa. Ary rehefa tena ratsy aza ny "grafite" dia lasa lavenona ataon'ny olona fandrahoana na ilay atao amin'ny teny vahiny hoe: "Combustion". Ka enga anie ny "GRAFIT" mba tsy ho toy izany fa dia hamiratra hoatra ny "Diamant" ka hampamiratra ny finoana eo anatrehan'Andriamanitra tokoa ka hahita ny voninahiny.
Ny fikambana dia vao fotoana fohy izay no niorenany, ary mbola manana ezaka amin'ny fampitaovana ny fiangonana eo amin'ny fanamafisam-peo sy ny fitaovana rehetra amin'ny zava-maneno, koa am-panetren-tena lehibe no anambaranay izany, asan'Andriamanitra izy io, ary Izy no milaza fa "midera azy amin'ny kipantsona tsara feo, ny aponga tapaka,........" ka izay no nahatonga ny GRAFIT hanana tetikasa amin'izany. Ho fampitomboana ny aim-panahin'ny olona sy hamptombo bebekokoa ny faharisihana satria rehefa mihira amin'ny fo mantsy ny olona iray dia mahazo hery; ary mitombo iahany koa ny aim-panahy ao aminy. Tsy eo amin'ny lafiny fitendrena ihany no sahaninay, fa manana fikasana ihany koa hihira amin'ny maha lafiny zava-kanto azy moa izany. Mbola hatolotra ato amin'ny manaraka ihany moa ny anaran'ireo birao ao anatin'izany fikambanana izany.
Ny olona tsirairay avy dia samy nomen'Andriamanitra talenta avokoa, ary nozarazarainy koa ny fanomezam-pahasoavana, ka izany no namivondronana ny hery ho iray, entina manao zavatra tsara indrindra. Koa isika rehetra no miara-mientana noho izany fampandrosoana ny asan'Andriamanitra izany, fa tsy ny fikambanana irery ihany. mangataka vavaka ihany koa mba hanomezan'ny Tompo tolo-tsaina mandrakariva, hahatanterahana ny asa izay nanirahany ny mpanompony dia ny fitoriana ny filazantsara manerana izao tontolo izao, manana ny fikasany avokoa ny olona rehetra nefa raha tsy eo ny Tompo tsy ho tanteraka izany. Koa herezo ary ry rahalahy ny fanatanterahana izany adidy napetraky ny Tompo aminao izany. Tanteraho ampitiavana sy ampifaliana izany, fa izay no zara-fanompoana nomena anao dia ataovy tsara. Ka ny dera sy ny laza anie dia ho an'Andriamanitra irery ihany, ny fiadanany kosa hoamintsika rehetra.
Mpanoratra: RANDRIANANDRASANA Roger
1. solomamy milan | 27/12/2010
salut daholo nareo!manasa anareo rehetra mba itsidika ny ny fiagonanay sy ny group GRAFIT fa ny tompo no mitsena anao ao.
2. Pasteur Jean Aimé | 31/12/2010
Mahereza ny GRAFIT hanandratra avo dia avo ny Fideràna an'Andriamanitra eto amin'ny FPVM TSARAHONENANA.
Tsy maintsy tafita isika miaraka amin JESOSY KRISTY!
3. solomamy milan | 31/01/2011
miarahaba atsika rehetra amin'ny anaran'jesosy
ampatsiahivina isika rehetra mpikambana rehetra ao am GRAFIT fa ny alahady faha 6 febroary ho avy izao ny fiaraban'tsika tratrin' taona.misaotra antsik rehetra amin'ny anaran'jesosy kristy tompotsika.
4. Roger (site web) | 13/03/2015
Miarahaba atsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy.
Ilazana isika rehetra mpikambana ato amin'ny GRAFIt fa mivory isika ny Alahady izao aorian'ny fidirana faharoa.